မြန်မာအိုင်ဒေါပြိုင်ပြီး စပွန်ဆာရထားတယ်လို့ စွပ်စွဲနေတဲ့သူတွေကို မိသားစုပိုင်ဆိုင်မှုတွေ ချပြလိုက်တဲ့ ငွေဇင်လှိုင်း – CharTake
မြန်မာအိုင်ဒေါပြိုင်ပြီး စပွန်ဆာရထားတယ်လို့ စွပ်စွဲနေတဲ့သူတွေကို မိသားစုပိုင်ဆိုင်မှုတွေ ချပြလိုက်တဲ့ ငွေဇင်လှိုင်း
မြန်မာအိုင်ဒေါပြိုင်ပြီး စပွန်ဆာ ရထားတယ်လို့ စွပ်စွဲနေတဲ့သူတွေကို မိသားစုပိုင်ဆိုင်မှုတွေ ချပြလိုက်တဲ့ ငွေဇင်လှိုင်း
မြန်မာအိုင်ဒေါ သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကနေတဆင့် ဂီတခရီးလမ်းကို လျှောက်လှမ်းလာခဲ့တဲ့ အဆိုတော် ငွေဇင်လှိုင်းကတော့ တမူးသူလေးဖြစ်သလို တမူးမြို့က မိသားစုနေအိမ်လေးကို ရဲရဲနီအောင် အလှဆင်ပြီး NLD ပြိုင်ပွဲကို ဝင်ပြိုင်ရာမှာ ပထမဆု ရရှိခဲ့တာကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးလည်း သိရှိပြီးဖြစ်မှာပါ။
ပထမဆုရခဲ့တဲ့ သူတို့ရဲ့ အိမ်ပုံလေးကိုတော့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာ မျှဝေခဲ့သလို အိမ်ကြီး အိမ်ကောင်းနဲ့ နေနိုင်တဲ့ ငွေဇင်လှိုင်းကိုတော့ မြန်မာအိုင်ဒေါမှာ ဝင်ပြိုင်ပြီး စပွန်ဆာရလို့ အခုလို အိမ်ကြီးကြီးနဲ့ နေနိုင်တာဖြစ်ကြောင်း ပုတ်ခတ်သူတချို့လည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေ့မှာတော့ အခုလို မသိဘဲ ဝေဖန်နေကြသူတွေ အတိအလင်းသိစေဖို့ ငွေဇင်လှိုင်းကတော့ မိသားစု ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ချပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါလေးတစ်ခုတော့ အတိအလင်းပြောချင်ပါတယ် … ငွေဇင်တို့ အိမ်ရဲ့ သက်တမ်းကို လာကြည့်ပါ …. Idol မပြိုင်ခင်ကတည်းက ဆောက်ပြီးသားပါလို့…
စပွန်ဆာ စပွန်ဆာ ဆိုတဲ့ စကားတွေ ခဏခဏ ပြန်ပြန်ကြားရတာလည်းရှိပါတယ် ပြုံးမိပါတယ် … လူတစ်ဦး တယောက်ရဲ့အကြောင်းကို သေချာမသိဘဲနဲ့ စိတ်ထင်ရာ ဝေဖန်ပီးလျှောက်ပြောနေမယ့် အစား သေချာလေးသိဖို့ စုံစမ်းလို့ရပါတယ် … ကျမတို့အိမ်က တမူးမြို့မှာ မီးသတ်ရုံးနဲ့ကပ်ရပ် … အာရှလမ်းမကြီးဘေး ဈေးအနောက် ပေါက်မှာ ထီးထီးကြီးရယ် …
အိမ်ကြီးပဲ (၆) လုံးလောက်ရှိတာ ဒါတောင် ဆောက်နေတာ တစ်လုံး ရှိသေးတယ်ရယ်… နန်းဖာလုံ ဈေးမှာလည်း ဆိုင်ခန်းတွေ ရှိတယ် ။ သမာအာဇီဝ လုပ်ကိုင်စားသောက် နေပါတယ်…တမူးမြို့ တင်မဟုတ်ဘဲ မုံရွာ မန္တလေး ပြင်ဦးလွင် မူဆယ် ရန်ကုန် တင်မ က အိန္ဒိယနိုင်ငံ ပြည်ထဲအထိ ကျမတို့ စီးပွားရေး တွင်ကျယ်ပါတယ်သိထားဖို့ …
ရေးလို့သာရေးရတာ ဒါတေမြင်ပီး ဘောစိ ထင်မသွားကြနက် ကျမပိုင်တာမရှိဘူးရယ် ..မိဘပိုင်တာ… ကျမကတော့ မိဘလုပ်စာ ထိုင်စားနေတာမဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုရပ်လာတာကို ဆယ်စုနှစ်ရှိနေပါပီနော် ဒီ့ထက်ပို သိချင်ရင် ထပ်ဖြေပေးမယ် ကိုယ်တိုင်တော့လာမေး …
ကျန်ခဲ့လို့ ကျမကတော့ ခုလောလောဆယ် ခွေထုတ်ပီး မွဲနေတာရယ် ဆိုပြီး အခြေအမြစ်မရှိဝေဖန်နေသူတွေ သိစေဖို့ သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်အကောင့်မှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ … အနုပ ညာ အသိုင်းအဝိုင်းထဲဝင်မှ ငွေဇင်လှိုင်းတို့က ပိုက်ဆံရှိလာတာ မဟုတ်ကြောင်း စပွန်ဆာရနေပြီလို့ ပြောနေတဲ့သူတွေ သိစေဖို့အတွက် အခုလို အတိအလင်း ဖြေရှင်းခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Source – NgweZin Hline
Unicode … မွနျမာအိုငျဒေါပွိုငျပွီး စပှနျဆာ ရထားတယျလို့ စှပျစှဲနတေဲ့သူတှကေို မိသားစုပိုငျဆိုငျမတှေ ခပြွလိုကျတဲ့ ငှဇေငျလငျး
မွနျမာအိုငျဒေါ သီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲကနတေဆငျ့ ဂီတခရီးလမျးကို လြာကျလမျးလာခဲ့တဲ့ အဆိုတျော ငှဇေငျလငျးကတော့ တမူးသူလေးဖွဈသလို တမူးမွို့က မိသားစုနအေိမျလေးကို ရဲရဲနီအောငျ အလဆငျပွီး NLD ပွိုငျပှဲကို ဝငျပွိုငျရာမာ ပထမဆု ရရခဲ့တာကိုတော့ ပရိသတျကွီးလညျး သိရပွီးဖွဈမာပါ။
ပထမဆုရခဲ့တဲ့ သူတို့ရဲ့ အိမျပုံလေးကိုတော့ လူမကှနျရကျ စာမကျြနမာ မဝြခေဲ့သလို အိမျကွီး အိမျကောငျးနဲ့ နနေိုငျတဲ့ ငှဇေငျလငျးကိုတော့ မွနျမာအိုငျဒေါမာ ဝငျပွိုငျပွီး စပှနျဆာရလို့ အခုလို အိမျကွီးကွီးနဲ့ နနေိုငျတာဖွဈကွောငျး ပုတျခတျသူတခြို့လညျး ရခဲ့ပါတယျ။
ဒီနမေ့ာတော့ အခုလို မသိဘဲ ဝဖေနျနကွေသူတှေ အတိအလငျးသိစဖေို့ ငှဇေငျလငျးကတော့ မိသားစု ပိုငျဆိုငျမတှကေို ခပြွခဲ့ပါတယျ။ ဒါလေးတဈခုတော့ အတိအလငျးပွောခငျြပါတယျ … ငှဇေငျတို့ အိမျရဲ့ သကျတမျးကို လာကွညျ့ပါ …. Idol မပွိုငျခငျကတညျးက ဆောကျပွီးသားပါလို့ …
စပှနျဆာ စပှနျဆာ ဆိုတဲ့ စကားတှေ ခဏခဏ ပွနျပွနျကွားရတာလညျးရပါတယျ ပွုံးမိပါတယျ … လူတဈဦး တယောကျရဲ့အကွောငျးကို သခြောမသိဘဲနဲ့ စိတျထငျရာ ဝဖေနျပီးလြာကျပွောနမေယျ့ အစား သခြောလေးသိဖို့ စုံစမျးလို့ရပါတယျ … ကမြတို့အိမျက တမူးမွို့မာ မီးသတျရုံးနဲ့ကပျရပျ … အာရလမျးမကွီးဘေး ဈေးအနောကျ ပေါကျမာ ထီးထီးကွီးရယျ …
အိမျကွီးပဲ (၆) လုံးလောကျရတာ ဒါတောငျ ဆောကျနတော တဈလုံး ရသေးတယျရယျ… နနျးဖာလုံ ဈေးမာလညျး ဆိုငျခနျးတှေ ရတယျ ။ သမာအာဇီဝ လုပျကိုငျစားသောကျ နပေါတယျ…တမူးမွို့ တငျမဟုတျဘဲ မုံရှာ မန်တလေး ပွငျဦးလှငျ မူဆယျ ရနျကုနျ တငျမ က အိန်ဒိယနိုငျငံ ပွညျထဲအထိ ကမြတို့ စီးပှားရေး တှငျကယျြပါတယျသိထားဖို့ …
ရေးလို့သာရေးရတာ ဒါတမွေငျပီး ဘောစိ ထငျမသှားကွနကျ ကမြပိုငျတာမရဘူးရယျ ..မိဘပိုငျတာ… ကမြကတော့ မိဘလုပျစာ ထိုငျစားနတောမဟုတျဘဲ ကိုယျ့ခွထေောကျပျေါကိုရပျလာတာကို ဆယျစုနဈရနပေါပီနျော ဒီ့ထကျပို သိခငျြရငျ ထပျဖွပေေးမယျ ကိုယျတိုငျတော့လာမေး …
ကနျြခဲ့လို့ ကမြကတော့ ခုလောလောဆယျ ခှထေုတျပီး မှဲနတောရယျ ဆိုပွီး အခွအေမွဈမရဝဖေနျနသေူတှေ သိစဖေို့ သူ့ရဲ့လူမကှနျရကျအကောငျ့မာ ရေးသားခဲ့ပါတယျ ပရိသတျကွီးရေ … အနုပ ညာ အသိုငျးအဝိုငျးထဲဝငျမ ငှဇေငျလငျးတို့က ပိုကျဆံရလာတာ မဟုတျကွောငျး စပှနျဆာရနပွေီလို့ ပွောနတေဲ့သူတှေ သိစဖေို့အတှကျ အခုလို အတိအလငျး ဖွရေငျးခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ Source – NgweZin Hline